नाम र अनुहार मिल्दा के असर परेको छ अभिनेत्रीहरुलाई ? - Forseenetwork : Nepalko entertainment web site : nepali cinema & Gossip : nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : nepali art ,music , manoranjan & more
नाम र अनुहार मिल्दा के असर परेको छ अभिनेत्रीहरुलाई ?
१७ पुष, २०७३ | Forseenetwork
loading... अभिनेत्री बर्षा सिवाकोटी र बर्षा राउतको नाम र अनुहार धेरैलाई उस्तै लाग्छ । आफ्नो नाम र अनुहार अरुसँग मिल्दा कस्तो लाग्छ भनेर हामीले केही समय अगाडि अभिनेत्री बर्षा राउतलाई सोधेका थियौँ । त्यसको जवाफमा उनले आफूले काममा मात्रै ध्यान दिने र यस्ता कुराहरुले आफूलाई खासै असर नपर्ने बताएकी थिईन् । उनले आफूले कस्तो काम गरिरहेको छु म त्यसमा मात्रै ध्यान दिन्छु । अरुले के भन्छ म त्यसमा ध्यान दिन्न पनि भनेकी थिईन् ।
हालै मात्र बर्षा सिवाकोटीले पनि नाम जुधेर आफूलाई असर नभएको बताईन् । “दर्शकले दुवै जनाको काम देखिसक्नु भएको छ । मेरो भन्दा पनि बर्षाको काम देख्नु भएको छ । मैलै त अझै आफ्नो काम पर्दामा देखाउन पाएको छैन । बर्षाकोे कामलाई दर्शकले मन पराईसक्नु भएको छ । फेरि हामी दुवैजनालाई नै राम्रो–राम्रो प्रोजेक्ट नै हात परेको छ । त्यसले गर्दा पनि हाम्रो नाम र अनुहारको चर्चा भएको हो जस्तो लाग्छ । म पशुपति प्रसाद ,लप्पन छप्पनको बर्षा, उहाँ जात्रा , छक्का पञ्जा को बर्षा । सिनेमाको सफलता र चर्चाले पनि हाम्रो चर्चा भएको होला । हामी एटै समयमा यो क्षेत्रमा आयौ त्यो भएर पनि यस्तो भएको हो ।
हामी पहिले म्युजिक भिडियोमा बढी देखिन्थ्यौँ । त्यसले मात्रै कन्फ्युजन भएको जस्तो मलाई लाग्छ । मलाई हाम्रो अनुहारमा मान्छेहरु झुक्किन्छन् जस्तो त लाग्दैन”, बर्षाले भनिन् ।
हाल यी दुवै जना सिनेमा मेरो पैसा खोईको तयारीमा जुटेका छन् । उनीहरुले मेरो पैसा खोईबाट पहिलो पटक पर्दा बाँड्दैछन् ।
१० नेपाली अभिनेत्री, कसका बुवाआमा के गर्छन् ?
सिनेमा क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जहाँ मेन्टेन भएर बस्नको लागि आर्थिक रुपमा बलियो हुनुपर्छ । यहि कारण पनि होला यो क्षेत्रमा धेरै जसो सम्प..
मेरो पैसा खोई, मोटो रकममा अनुबन्धित बर्षा
करिअरमा ब्रेक लाग्ने डरले बर्षाले भनिन् ,अहिले विवाह गर्दिन
छक्का पञ्जाले सय दिन मनाउदा जात्रा छैठौँ हप्तामा चल्दै
२३औँ जन्मदिन मनाउँदै बर्षा, यसपालीको सरप्राईज प्रेमीको हातमा छ
जात्राको सिक्वेल बन्ने ?